Indlu enemigangatho emithathu inamagumbi okulala amahlanu kunye namagumbi okuhlambela amathathu anesiqingatha aneebhedi zeendwendwe ezilishumi elinanye. Ikhaya lihlaziywe ngokupheleleyo ukuze liphile ubomi obutofotofo ngelixa ligcina isimilo kunye ne-ambience yendawo yokuhlala yaseFransi.
Ikhitshi elinomgangatho wamatye lihlaziywe ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, kunye neetafile ezifakwe iithayile. Ivula kwigumbi losapho elinebha yokutyela, umabonwakude, iisofa ezitofotofo, kunye neengcango zaseFransi kwipatio yentendelezo kunye ne-terrace. Kwakhona kulo mgangatho kukho iwasha yeempahla kunye nesomisi.
Phezulu kumgangatho ophakathi, igumbi lokulala eliphambili linebhedi elingana nenkosi phantsi kwesilingi ephezulu yeemitha ezintandathu enemiqadi evelileyo. Indawo yomlilo, ibhalkhoni, kunye negumbi lokuhlambela elineshawari elineshawari yenza eli ibeligumbi lokulala elitofotofo.
Amanye amagumbi amathathu okulala akumgangatho ophakathi, asebenzisa igumbi lokuhlambela. Ezimbini zineebhedi ezilingana nokumkanikazi, enye ineebhedi ezingamawele amabini. Kumgangatho ongentla kumgangatho ongasentla kukho igumbi losapho elinebhedi elingana nokumkanikazi, oomatrasi bokutsala abantwana, kunye negumbi lokuhlambela eline-en-suite.
Ibekwe embindini wezidiliya zeChampagne, ezinezindlu ezimbalwa kwindawo ekufutshane, iindwendwe zinikwa ubumfihlo obupheleleyo kunye nokubaleka okuzolileyo ngaphakathi kwezidiliya. Ilali enomtsalane yendawo ifikeleleka ngeenyawo kwiibhegu ezitsha kunye neepastries. Kwiindawo ezijikelezileyo, zininzi izindlu ze-champagne ezimnandi ezityelelwa ziindwendwe ezininzi kwaye zonwabele i-champagne yasekhaya kunye nemnandi. Emva kokuqinisekiswa, umamkeli-ndwendwe unokukunika iingcebiso ezenzelwe wena ngakumbi kunye nethuba elikhethekileyo nelinomdla lokuzama i-champagne (Phillippe Mignon Champagne) eveliswa kwiidiliya ezivunwa kwipropathi yaseLa Ravenne! Indlu yimizuzu engama-20 ukusuka e-Epernay nase-Chateau Thierry, ekulungele kangcono iivenkile ezinkulu zegrosari kunye nohambo.